Nhau - Indasitiri Yepasirese yeMasimba Anoshandura kusvika 2027
Indasitiri yepasirese yeMasimba Shanduko kusvika 2027
Kuwedzera Kushandiswa Kwemagetsi Anogona Kuvandudzwa uye Asingawanzoiti Emagetsi Anopa Mikana
Saizi yemusika wepasi rose inoshandura simba pamadhora mazana maviri nemakumi manomwe nenomwe muna 2019, uye inotarisirwa kusvika pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora panosvika 2027, ichinyoresa CAGR ye7.9% kubva 2020 kusvika 2027.
Simba rekushandura imhando yeshanduko inoshandiswa kunyanya kugamuchira yakaderera voltage jenareta simba remagetsi uye kuiendesa panzira yekugovera pane network yemagetsi. Iyo inoumba chikamu chakakosha chegidhi remagetsi uye inobatsira mukufambisira kwesimba kubva kune imwe network kuenda kune imwe pasina shanduko muhuwandu. Aya ma transformer anoshanda pamutoro wepamusoro uye akagadzirirwa kuve nehunyanzvi hwepamusoro pamutoro wakazara. Makumi emakore ekutsvagisa mumatanho ekutapurirana zvakakonzera kuwedzera kwemagetsi ekutapurirana. Magetsi emagetsi anogonesa kufambisa kwemagetsi yakaderera-voltage kune yakakwirira-voltages.
Simuka mukushandiswa kwemagetsi, kutsiva magetsi aripo, uye kuwedzera kutorwa kweakangwara grid uye akangwara anoshandura anotyaira musika wepasi rose wemagetsi. Kuwedzera kudiwa kwemagetsi uye kubuda kwemagetsi anovandudzwa kunosimudzira kutorwa kweakakwira magetsi ekufambisa matekinoroji akadai seUHV, HVAC uye HVDC magetsi emagetsi. Nyika zhinji dzine urombo hadzina kushandisa zviwanikwa zvesimba zvishoma nepo munyika dzichiri kusimukira pachidiwa kuvandudzwa kwesimba rese. Kuuya kweUltra high voltage (UHV) kutapurirana (1100KV uye pamusoro) kwakonzera kudiwa kwekuvandudzwa kwetiweki yekutapurirana pasirese. Magetsi emagetsi anobatsira kubatanidza zvidyarwa zvemagetsi zvinogonekazve kune aripo ekufambisa network. Nekudaro, kubuda kwesimba rinodzokororwa sechinhu chekutanga chesimba kunopa mikana yekukura kwenguva refu kumusika wepasi rose wemagetsi ekushandura.
Nekudaro, mutengo wezvinhu zvakasvibirira, kuomarara mukugadzira nekuvaka kwemagetsi emagetsi pamwe nekutsigira zvivakwa zvinodiwa pakugadzikana uye kwehupenyu hwese transformer kushanda kunoita kuti magetsi emagetsi adhure uye asingadhure.
Musika wepasi rose wesimba rekushandura wakakamurwa zvichienderana neshanduro chiyero uye dunhu. Zvichienderana nechiyero, musika wakakamurwa mune yakaderera, yepakati, uye yakakwirira rating magetsi emagetsi. Zvichienderana nedunhu, yakakamurwa kuNorth America, Europe, Asia-Pacific, uye LAMEA.
Ruzivo kubva kuResearchAndMarkets.com
Nguva yekutumira: Aug-19-2020